SOM-(Villa Somalia)-Agaasinkii-Madaxtooyada Qeybta Warfaafinta-Oo Xilka Laga Qaaday Laguna-Beddelay Mr-C/Nuur!!…Warbixin… | Allkisima.com
SOM-(Villa Somalia)-Agaasinkii-Madaxtooyada Qeybta Warfaafinta-Oo Xilka Laga Qaaday Laguna-Beddelay Mr-C/Nuur!!…Warbixin…
Allkisim_Phot's-Villa-SOMALIA-Agaasimayaal la Isku-Beddalay-1-JPG.
Muqdisho:-(Allkisima)_Agaasimihii Warfaafinta Madaxtooyada Shador Xaaji Max’ud oo ka mid ahaa raggii aadka ugu dhowaa M/weynihii hore Xassan Sheekh Maxamuud ayaa xilka laga qaaday.
Xil ka qaadistan ayaa timid, kaddib markii uu amar ku bixiyay M/weyne Farmaajo in la bedelo Shador Xaaji, iyadoo lagu bedelay Agaasime cusub.
Agaasimaha cusub ee Warfaafinta M/weynaha ayaa loo magacaabay Mr-C/nuur Max’ed Axmed oo ah nin dhalinyaro ah, kana mid ahaa Raggii qeybta weyn ka qaatay ololihiisa dhinaca warbaahinta iyo mida baraha bulshada.
Sidoo kale is beddel ayaa lagu sameeyay qeybta Warfaafinta Madaxtooyada, ka-dib markii uu ka shakiyay M/weyne Farmaajo xubnihii ka shaqeynayay qeybtan muhiimka u ah.
Madaxtooyada ayaa wali waxaa ka socota kala shaandheynta xilalka iyo baal-siibka lagu haayo xubnihii horay ula soo shaqeeyay M/weynihii hore Xassan Sheekh Max’ud.
Villa Somalia ayaa wali ku jirta xaalad kala guur ah iyo xilal kala bedel, iyadoo dhowaan lagu wado in Agaasime Guud oo rasmi ah loo magacaabo Madaxtooyada, iyadoo Agaasimaha xilligan ee KMG ah Cali Fiqi uu ka mid noqon doono Wasiirada cusub waa warar aan la hubin ay sheegayaan.
Dhanka kale M/weyne Farmaajo oo markii ololihii doorashada uu ku guda jiray ay la soo shaqeeyeen Kooxo badan ayaa la filayaa in kooxdiisa in laga shaqaaleysiiyo Madaxtooyada.
Dhinaca kale waxaa booskii uu ka tagay Siyaad Max’ud Shire oo ahaa Madaxa Protocol-ka ama Hab maamuuska Madaxtooyada ayaa waxaa lagu bedelay nin cusub oo lagu magacaabo C/llaahi Yuusuf.
Ugu dambeyntiina waxaa xusid mudan In Madaxda Soomaalida ay caado u tahay marka ay xafiiska la wareegaan inay soo dhoweystaan dadka ugu dhow ama ku heybta ah, ama ku fekerka ah waxaana dhaqankan uu ahaa mid soo jireen ah Oo laga bartay Madaxdii hore oo ay ka hoos-shaqeyn jireen dad qaraabo ama saaxibbo la ah.